Ny Turkish Airlines dia mitazona ny fanitarana azy atsy Afrika
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Turkish Airlines dia mitazona ny fanitarana azy atsy Afrika
Ny Turkish Airlines izay manidina amin'ny firenena sy toeran-kafa maro manerantany dia mitazona ny fanitarana azy amin'ny alàlan'ny fandefasana sidina mankany Banjul izay renivohitr'i Gambia. Hatramin'ny 26 Novambra 2018, ny sidina Banjul dia hiasa indroa isan-kerinandro ary mifandray amin'ny sidina Dakar.
Banjul izay renivohitra sy tanàna seranan-tsambon'i Gambia, miorina miaraka amin'ny Oseana Atlantika. Miaraka amin'ny sidina Banjul, ny Turkish Airlines dia nampitombo ny tambajotram-sidiny ho 54 any Afrika amin'ny fanamafisana ny fisiany ao amin'ny kaontinanta. Taorian'ny fanampiana an'i Banjul, ny Turkish Airlines izao dia mahatratra firenena 123 miaraka amin'ny toerana 305 manerantany.
Nandritra ny lanonam-panokafana dia nanondro ny filoha lefitra misahana ny varotra (2. Faritra) Andriamatoa Kerem Sarp: "Mino izahay fa hampitombo ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany sy ny varotra maneran-tany ary maharitra i Afrika ary mbola mampiasa vola hatrany an'i Afrika. Banjul no toerana faha-54 an'ny tamba-jotra eto Afrika. Noho izany, mino izahay fa ny sidina Banjul dia handray anjara hahitana ny mety ho an'i Gambia manerantany. Amin'ny maha-mpitondra sainam-pirenen'i Torkia sy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka azy izay manidina amin'ny toerana maro any Afrika, dia manolotra hatrany ny kalitaon'ny serivisy any amin'ny faritra rehetra manerana an'i Afrika ny Turkish Airlines. ”
Fotoanan'ny sidina Banjul araka ny fandaharam-potoana nanomboka ny 26 Jona:
Fiaramanidina No. Andro Fahatongavana